“Wax La Qaadan Karo Maaha In Askarigan Muwaaddinka Ah Aanu Haysan Dallaayad Roobka Ka Dugsado Taliyihiisina Uu Wato Gaadhi V8 Ah Oo 50 Kun Oo Doollar Ah…” Xildhibaan Barkhad Batuun – somalilandtoday.com
“Wax La Qaadan Karo Maaha In Askarigan Muwaaddinka Ah Aanu Haysan Dallaayad Roobka Ka Dugsado Taliyihiisina Uu Wato Gaadhi V8 Ah Oo 50 Kun Oo Doollar Ah…” Xildhibaan Barkhad Batuun
Askarigani wuxuu mudanyahay billad sharaf. Waa muwaaddin daacadnimo iyo dadaal dheeraad ah muujiyey, duruuf kasta oo haysatana danta guud iyo adeegga dadweynaha ku dadaalay. Hambalyo ayaan leeyahay geesigaas.
Damiir ahaan iyo dawladnimo ahaan ba wax la qaadan karo maaha in askarigan muwaaddinka ah aanu haysan dallaayad roobka ka dugsado;taliyihiisina uu wato gaadhi V8 ah oo 50 kun oo Doollar ah!
Baarlamaan ahaan, Waxa aannu xoogga saari doona sidii ciidankeenna noloshooda loo ilaalin lahaa, miisaaniyaddana xuquuq badan looga siin laha direyskooda, gawaadhidooda, nolosha qoysaskooda, Mushaharkooda, iyo quruxintoodaba. Ciddii kaga tagri fasha maaliyaddoodana maxkamad ayaannu la tiigsan doonnaa.
Ballankeenu waa Baarlamaan ka shaqeeya Sinnaanta muwaadiniinta iyo sarreynta sharciga.